अत्यधिक कपाल झर्ने समस्या छ? – Saurahaonline.com
अत्यधिक कपाल झर्ने समस्या छ?
स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार कपाल झर्ने समस्या खानेकुरा र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यदि तपाईंको खाना स्वस्थ्य छ भने तपाईंको कपाल पनि स्वस्थ्य हुन्छ ।
पेटको स्वास्थ्य समस्याका कारण कपालमा पनि थुप्रै समस्या देखापर्छन् । अनुसन्धानका अनुसार एक स्वस्थ्य आन्द्राले अलग–अलग माइक्रोअर्गानिज्म ९सुक्ष्मजीव० लाई स्वस्थ्य राख्छ । यसको असर शरीरिक प्रक्रियामा पर्छ । त्यस्ता प्रतिक्रियाका असर दिमागसँगै कपालमा पनि पर्छ ।